Wearkwà mmiri akpụkpọ ụkwụ, Egwuregwu Egwuregwu, Wekwà Ejiji N'èzí - Kuanyang
Emebila mmebi mebiri ụwa anyị nke e ji plastik mee ihe gabiga ókè
Plastic bụ ngwaahịa nke oge anyị, ọkachasị n'oké osimiri. Akpa rọba na karama PET wakporo usoro okike nke ụwa ma gbasaa n'ụwa niile. Dabere na ọnụ ọgụgụ, ihe ruru nde 9 nke iberibe plastik na-agbakwunye n'oké osimiri kwa afọ. Na nzaghachi nye nsogbu a, imegharị ha n'ọnọdụ nke polyester ala (nke na-erepịa mmanụ buru ibu) bụ azịza gburugburu ebe obibi kachasị mma.
Wuxi Kuanyang Textile Technology Co., Ltd. bụ ọkachamara na mmepe na ntinye nke egwuregwu egwuregwu n'èzí na ime ụlọ. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, n'ihi nchegbu mba ụwa nke mmetọ plastik, ụlọ ọrụ anyị na-agbanwe ka ọ bụrụ ihe eji arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi na ngwaahịa na-adịgide adịgide. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ anyị enwetala asambodo GRS ma bụrụ onye na-azụ ahịa ngwa ngwa.
Uwe ahụ gosipụtara
PRODUCT CATEGORY Bullet FILRIC IT NO KWB-2125 Tụkwasịnụ Type Mee-na-Order Ihe 95% Po ...
PRODUCT CATEGORY Sportswear Flim item IT NO KW6402 Tụkwasịnụ Type Mee-na-Order Ihe 86% ...
PRODUCT CATEGORY Egwuregwu Egwuregwu EGO NO KW18-9040 Tụkwasịnụ Type Mee-na-Order Ihe ...
PRODUCT CATEGORY Yoga eyi akwa Ngwaọrụ KW18-1077 Tụkwasịnụ Type Mee-na-Order Ihe 8 ...
Product Category Swimsuit FILRIC IT NO KW-2182 Tụkwasịnụ Type Mee-na-Order Ihe 92% N ...
PRODUCT CATEGORY Sportswear Flim ITEM NO KW-2182 Tụkwasịnụ Type Mee-na-Order Ihe 88 ...
PRODUCT CATEGORY Jaketị AKW NOKWỌ Ngwa KWS21-1021 Tụkwasịnụ Type Mee-na-Order Ihe 10 ...
PRODUCT CATEGORY Yoga eyi akwa Ngwa NO KWC21-4081 Tụkwasịnụ Type Mee-na-Order Ihe ...
N'ogbe egwuregwu Jacqua ...
PRODUCT CATEGORY Yoga eyi akwa Ngwa NO KWC21-4079 Tụkwasịnụ Type Mee-na-Order Ihe ...
Ọ dịghị ihe dị mma karịa ịhụ nsonaazụ njedebe. Mụọ maka inweta epilog
a broshuọ nke laser osise samples. Naanị rịọ maka ozi ndị ọzọ
Gụọ ụfọdụ akụkọ
Laghachi na agba agba nke egwuregwu-eziokwu ...
Ime ụlọ mma-nghọta n'ime egwuregwu indus ...
Egwuregwu ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ...
Mgbakwunye mara mma-nkọwa zuru ezu nke yoga ...
Nchekwa gburugburu ebe obibi na nkwado ...